चीन Piperonyl Butoxide कारखाना र आपूर्तिकर्ता लेमान्डौ
पाइपरोनिल बुटोअक्साइड एक धेरै प्रख्यात कीटनाशक सिनर्जिस्ट हो, कीटनाशक कीटनाशक प्रभाव सुधार गर्न दशौं पटक प्रयोगको समय पनि बढाउन सक्छ, कीटनाशक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढाउन सक्छ। पाइपरोनिल बुटाइल ईथर कृषि, घरेलु स्वास्थ्य र गोदाम कीटनाशकमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, संयुक्त राष्ट्र संघको अद्वितीय स्वास्थ्य संगठन हो जुन सबैभन्दा बढी प्रभावकारी सिनर्जिस्टिक कीटनाशकमा खाद्य स्वास्थ्य (खाद्य उत्पादन) को लागि अनुमोदित छ।
सामग्री (%) ≥ .00 .00०
सापेक्ष घनत्व 1.0400-1.0700
रेफ इंडेक्स 1.4850-1.5100
पानी सामग्री (%) ≤०.२
उपस्थिति हल्का पहेंलो तरल
एसिडिटी (%) ०.55
एक कीटनाशक synergistic एजेन्ट को रूप मा प्रयोग गरीयो
धान, गहुँ र गेडाहरू जस्ता अन्नको भण्डारको समयमा उत्पादन गरिएको कीराहरूलाई मार्न प्रयोग गरियो
यो प्राय: कीटनाशक पायरेथ्रोइडको साथ संयोजनमा synergistic प्रभावको लागि जटिल बनाउन
यस उत्पादनले pyrethroid र विभिन्न pyrethroid रोटेनोन र carbamate insecticides को कीटनाशक गतिविधि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ
Piperonyl butoxide (PBO) के हो?
Piperonyl butoxide (PBO) एक मानव निर्मित कीटनाशक synergist हो। आफैमा, PBO कीरा हानि गर्न डिजाइन गरिएको छैन। यसको सट्टा, यसले बग किलरसँग उनीहरूको प्रभावकारिता बढाउन कार्य गर्दछ। पीबीओ प्राय: प्राकृतिक पायरेथ्रिन वा मानव निर्मित पायरेथ्रोइड्ससँग मिल्दछ। यो कीटनाशक उत्पादनहरुमा १ 50 s० को दशकदेखि प्रयोग भएको छ, जब यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिलो पटक दर्ता गरिएको थियो।
केहि उत्पादनहरू के हुन् जसले पाइपरोनिल बुटोक्साइड (PBO) समावेश गर्दछ?
त्यहाँ २,500०० भन्दा बढी कीटनाशक उत्पादनहरू छन् जुन सक्रिय घटक PBO समावेश गर्दछ। यसमा फोगर, डस्ट र स्प्रेहरू समावेश छन्। यी केही उत्पादनहरू घरको भित्र र बाहिर प्रयोग गर्न सकिन्छ। पीबीओ कृषि बाली र पशुपालनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। अन्य प्रयोगहरूले लामखुट्टे नियंत्रण कार्यक्रम र घरपालुवा जनावरहरूको लागि पिस्सू र टिक उपचार समावेश गर्दछ।
केही टाउकोको जुँगा उत्पादनहरूमा PBO हुन्छ र यो लोशन वा शैम्पूको रूपमा मानवमा लागू हुन सक्छ। संयुक्त राज्यको खाद्य र औषधि प्रशासनले व्यक्तिमा टाउकोको जुँगा नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिएका उत्पादनहरूलाई विनियमित गर्दछ। यी उत्पादनहरूलाई कीटनाशक मानिदैन।
सँधै लेबल निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् र जोखिमबाट बच्न कदमहरू चाल्नुहोस्। यदि कुनै जोखिमहरू देखा पर्दछ भने, ध्यानपूर्वक उत्पाद लेबलमा फर्स्ट एड निर्देशनहरू पालना गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
Piperonyl butoxide (PBO) कसरी काम गर्छ?
PBO यो आफैंले कीरा मार्न डिजाइन गरिएको छैन। कीराहरूको शरीरमा इन्जाइमहरू हुन्छन् जसले केही कीटनाशकहरू नष्ट गर्दछ। PBO यी ईन्जाइमहरु लाई रोक्छ र कीटनाशकलाई काम गर्न बढी समय दिन्छ। यसको मतलब कीराहरू पीबीओ र केहि कीटनाशकहरूको संयोजनबाट कम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
प्रारम्भिक अध्ययनहरूले पत्ता लगाए कि PBO ले pyrethrins कसरी हाउसफ्लाइजहरू मार्यो कति राम्रो बनायो। पीबीओ आफैंले झिंगाहरूलाई मार्न सकेन। दुबैको संयोजनले pyrethrins को कम मात्राको साथ अधिक नियन्त्रणको अनुमति दिईयो।
म कसरी पाइपेरोनिल बुटोअक्साइड (PBO) लाई सम्पर्क गर्न सक्दछु?
तपाइँ PBO लाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ सास फेर्दै, यसलाई खाएर, छोएर, वा यसलाई तपाईंको आँखामा लिएर। यस्तो हुनसक्छ घर भित्र वा बाहिर स्प्रे वा dusts लागू गर्दा। गीला सतहहरू वा कीटनाशक धुंध वा धूलोलाई इनहेलिंगबाट बच्नुहोस्। यदि तपाईं कीटनाशक अनुप्रयोग पछि आफ्नो हात नधोइ खानुभयो, धुम्रपान गर्नुभयो वा बाथरूमको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईं पनि पर्दाफास गर्न सक्नुहुन्छ। PBO दुबै कुकुर र बिरालाहरू प्रयोग गर्नका लागि दर्ता गरिएको छ फ्लाई र टिक उपचारहरूमा। मानिस उनीहरूको घरपालुवा जनावरको उपचार गर्दा वा उनीहरूले भर्खरको उपचार गरिएको पाल्तु पशुलाई छुने बेलामा उनीहरूले उजागर गर्न सक्छन्।
PBO को थोरै मात्रा खानामा फेला परेका अवशेषहरूको रूपमा उपस्थित हुन सक्छ। पीबीओ फसल भन्दा पहिले धेरै बालीहरूमा प्रयोगको लागि अनुमोदित छ। यो अधिकतम अवशिष्ट सीमा (सहिष्णुता) आवश्यकताहरूबाट छुट छ। केहि खाद्य पदार्थ पीबीओ संग फसल पछि उपचार गर्न सकिन्छ, बदाम, टमाटर, गहुँ, र जनावरको मासु सहित।
अघिल्लो: गिब्बरेलिक एसिड (GA3)
अर्को: मेटाथरिजियम एनिसोप्लिए